အနာဂတ်တွင်တွေ့မြင်ရနိုင်မည့် လူမှုအိမ်ထောင်ရေးပုံစံ ၉ခု - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
အနာဂတ်တွင်တွေ့မြင်ရနိုင်မည့် လူမှုအိမ်ထောင်ရေးပုံစံ ၉ခု
သင့်အနေနဲ့ သိပ္ပံနယ်လွန်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ပြီး ထိုဇာတ်လမ်းများထဲမှနည်းပညာတွေဟာ တစ်နေ့တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်မည်ဟု တွေးမိခဲ့ဖူးပါသလား။ အီလက်ထရောနစ် လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကို ပိုမိုလွယ်ကူ သက်သာစေလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ထားကြပြီး အချို့သောပစ္စည်းများဟာလည်း အမှန်တကယ်အထောက်အကူ ဖြစ်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နည်းပညာတွေဘယ်လိုလွှမ်းမိုးလာမလဲ၊ အနာဂတ်လူမှုအိမ်ထောင်ရေးမှာဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုအဖြေရှာကြည့်နိုင်ဖို့ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်၉ချက်ကို ရေးသားတင်ပြ လိုက်ပါတယ်။
၁. Augmented Reality (AR) နည်းပညာအတွက် စက်ပစ္စည်းများ
သင်သဘောကျနေသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနေပုံကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ အရာအားလုံး သာသာယာယာဖြစ်နေချိန်မှာပဲ ရုတ်တရတ် “လေအိုးကြီး” ဆိုပြီးသင့်ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ မိန်းကလေးအများစု ယောကျာ်းလေးတွေကို စမ်းသပ်ဖို့ရန် ဒီလိုပဲလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့သင့်ဆီကတုံပြန်လာမည့် အဖြေကို စောင့်မျှော်နေမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအဖြေကပဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကတော့ အဲဒီလိုစကားဝိုင်းလေး ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သွားစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းလေးနည်းနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Google ၊ Apple နှင့် အခြားသောကုမ္ပဏီများဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေထဲကို လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်တုများထည့်သွင်းလုပ်ရှားစေသည့် AR နည်းပညာကို သယ်ဆောင်လာပေးမည့် စက်ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မျက်မှန်များ၊ မျက်ကပ်မှန်များ သို့မဟုတ် ဦးနှောက်ချိတ်ဆက်စက်ပစ္စည်းများဖြင့်ပါ အသုံးပြုရနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါစက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအိမ်ထောင်ရေးတည်ဆောက်မှု၊ တုံပြန်မှုများအပေါ် လုံးဝပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်နေရချိန်မှာ ချစ်ရသူကိုအရမ်းလွမ်းနေပါသလား။ အခုဆိုရင်တော့ ဘယ်အချိန်ပဲရောက်ရောက် သူတို့ကိုသင်စိတ်ကြိုက်အနမ်းချွေလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိမပါတဲ့ မစ္စတာအာလူးသီး ကိုသင်နမ်းနိုင်သမျှပေါ့လေ။ ဒါအမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအထူးစက်ကိရိယာကို အဝေးမှသင့်ချစ်သူကို အနမ်းချွေနိုင်ဖို့အတွက် သုတေသနပညာရှင်များကတီထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိရိယာတွင် Special Sensor များနှင့် Actuator များပါ၀င်ပြီး တကယ့်အနမ်းစစ်ကဲ့သို့ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနမူနာပုံစံပဲရှိပါသေးတယ်။ သို့သော် အနာဂတ်လူသားများအနေနဲ့ အဆိုပါအထူးကိရိယာများကို အနမ်းပေးချွေဖို့ရန်သာမကဘဲ စိတ်ကြွစေရန်အတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် သုတေသနပညာရှင်များကတော့ အနာဂတ်တွင် ပုံရိပ်တုနှင့်အမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့သလိုခံစား စေရမည့်နည်းပညာကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ချစ်ရသူနဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့ရန်အတွက် အိမ်ထဲမှအိမ်ပြင်တောင်ထွက်စရာ လိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်၊ ကိုယ်အထိအတွေ့များကို လှုံဆော်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အထူး VR ကိရိယာများဖြင့်ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတီထွင်မှုတွေဟာ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေအတွက် အချိန်ကုန်လူပန်းသက်သာစေမှာဖြစ်ပြီး စိတ်တူကိုယ်တူ အဖော်များကိုလျင်မြန်စွာရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးမှာတော့ ထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ၁၉ရာစုမှ လူများကလည်း ယခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအိမ်ထောင်ရေးဖြစ်စဉ်များကိုထူးဆန်းတယ်လို့ ပြောကြသလိုပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ခေတ်သစ်ဝတ်စုံတွေရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားမှုက အချစ်ရေးကိစ္စတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သာမန်ရိုးရှင်းသည့်ဘဝကိုဖောက်ထွက်ဖို့ရန် လူသားတွေဟာ ၀တ်စုံများဖြင့်နွဲပျော်ရသည့်ပါတီများကို သွားရောက်ပြီး ၀တ်စုံကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်လာကြပါတယ်။ ထိုနေရာမှသာ သူတို့အနေနဲ့ တကယ့်လူမှုဘဝတွင် မရနိုင်သည် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော သူသာစူပါမန်းဆိုပါက ဘယ်သူနဲ့ ချိန်းဆိုချင်ပါသလဲ။ လူးဝစ်လိမ်းနဲ့လား ကော်ဖီဆိုင်ကကောင်မလေးချောချောလေးနဲ့လား။ အဖြေကရိုးရိုးလေးပါပဲ။
ပရိုဂရမ်မာတစ်စုကတော့ လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု၊ သူတို့နေချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်များအပေါ် အခြေခံပြီး လူများကိုတွဲဖက်ပေးသည့် ၀က်ဆိုက်တစ်ခုကိုတည်ထောက်နေကြပါပြီ။ အဆိုပါစနစ်မှ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များနှင့် စိတ်ပါ၀င်စားသည့်အခြေအနေများရ တွဲဖက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာတော့ ၀တ်စုံများဖြင့်ပျော်ပါးသည့်အလေ့အထဟာ အခုထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။
၅. ကွန်ပျူတာမှရှာဖွေပေးမည့် ရည်းစား
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အွန်လိုင်းမှလက်တွဲဖော်ရှာဖွေနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများစွာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ သူလုပ်ရမှာလေးကတော့ လျှောက်လွှာတစ်ခုတွင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုဖြည့်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် တွဲဖက်ကိုရှာဖွေလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်တွေဟာ မခက်ခဲသော်လည်း စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရန် မလွယ်ကူလှပါဘူး။ သိပ်မဝေးတော့သည့် အနာဂတ်တွင် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် ပရိုဂမ်များဟာ သင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၊ လူမှုမီဒီယာမှဓာတ်ပုံများနှင့် သူဆက်ဆံပြောဆိုနေသည့် လူများကိုစီစစ်ပြီး သင့်အတွက်လက်တွဲဖော်စာရင်းတစ်ခုပြုလုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့လုပ်ဆောင်ရတာ ပင်ပန်းကြန့်ကြာမှု ပိုမိုသက်သာပြီးမိမိစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်ချေလည်းပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ သမီးရည်းစား ၅၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ အွန်လိုင်းမှစတင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ သင်ယုံနိုင်ပါရဲ့လား။
ဒါကတော့သင့်ကိုအံ့သြသွားစေနိုင်သောလည်း လက်ရှိတွင်ဂျပန်၌စတင်အသုံးပြုနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ တစ်ကိုယ်တည်းသမားများအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက် သို့မဟုတ် မိသားစုတစ်စုလုံးကို အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းပါ ငှားရမ်းနိုင်မှာပါ။ ထိုသို့သောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ၀န်ဆောင်ခများမှာခေါင်ခိုက်နေသော်လည်း မိသားစုအများစုကတော့ ကြိုတင်ဘိုကင်ချိတ်ပြီးသားရှိနေပြီးပါပြီ။ တကိုယ်တည်းသမားများကတော့ကလေးများနှင့် ပန်းခြံတွင် ဆော့ကစားခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရှင်မနှင့် စျေးဝယ်ထွက်ခြင်း ကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးကို အသစ်အဆန်းတစ်ခုလို ပြုလုပ်နေကြပြီး အထီးကျန်မှုကိုသက်သာစေပါတယ်။
ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးအနာဂတ်တွင်ဘယ်လောက်ထိကျယ်ပြန့်သွားနိုင်မလဲတွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ အေဂျင်စီများစွာကတော့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားများအတွက် မိတ်ဆွေများ၊ ဆွေမျိုးများ၊ အိမ်ထောင်ရှင်မများဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသည့်အခိုက်အတန့်လေး ရရှိနိုင်စေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၇. DNA နှင့် အနုစိပ်ဇီဝဖြစ်စဉ်များတွဲဖက်ပေးခြင်း
အနာဂတ်တွင် ဆေးပညာဟာမိသားစုများနှင့် အိမ်ထောင်မှုအစီအစဉ်များအတွက် အရေးကြီးကဏ္ဍမှ ပါ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။ သုတ်ဘဏ်မှ အမျိုးမျိုးသောလှူဒါန်းသူများကို ရွေးချယ်နိုင်ရုံသာမက အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဆေးသမိုင်းကြောင်းကိုလည်း အပြည့်အဝသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သာမန်တွဲဖက်ရှာမည်ဆိုပါက သင့်အိမ်ထောင်ဖက်တွေ မည်သည့်ရောဂါများရှိမရှိသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူများကတော့ သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကို DNA စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကူညီရှာဖွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်အရ ဒါဟာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း အနာဂတ်တွင် ပြီးပြည့်စုံသည့်ဗီဇများဖြင့်ပေါင်းစပ်မွေးဖွားလာမည့်ကလေးကို မလိုချင်သူရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၈. အစားထိုးလက်တွဲဖော် Siri
“Her” ဟူသည့်ဇာတ်ကားလေးဟာ မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာတစ်ခုသို့မဟုတ် Siri ကဲ့သို့သော နည်းပညာလေးက ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေကိုအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားဆိုတာကို အနီးစပ်ဆုံးပုံဖော်ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကုန်သိထားပေမယ့် မိတ်ဆွေကဲ့သို့ အစားထိုးလက်တွဲဖော်အဖြစ် သူတို့ကိုအသုံးပြုလာနိုင်မှာပါ။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်များအရ ဒါဟာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲဖြစ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။ အချို့သောလူတွေဟာအကြောင်းကြောင်းကြောင့် တစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပြဿနာ၊ ကိုယ်လက်မသန်စွမ်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ ကြောက်ရွ့ံခြင်း ကဲ့သို့သော အကြောင်းအရင်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင် သူတို့အတွက်လက်တွဲဖော်ရရှိရန် မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အဆိုပါနည်းပညာနှင့် တကယ်လူသားအစစ်နှင့်ပင် အမှန်တကယ်လက်တွဲသွားရနိုင်ပါသေးတယ်။
မိမိရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသည်းတွေ တခွမ်းခွမ်းကွဲကြရလို့ စိတ်ပျက်နေကြသည့် တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့လိုလူတွေကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလေးထဲမှာပဲ ပုန်းအောင်းချင်နေကြပြီး စီလီကွန်အရုပ်များနှင့်သာပျော်မွေ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိဂျပန်မှာကျင့်သုံးနေသည့် အလေ့အထဖြစ်လို့လာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေကြချိန်မှာပဲ စက်ရုပ်များနှင့်ဘဝဟာ စတင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ လာမည့်နှစ်၅၀အတွင်း လူသားတွေဟာ စက်ရုပ်များနှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်ကြလိမ့်မည်ဟု ပြောဆိုထားကြပါတယ်။ ထို့အပြင် စိတ်ခံစားတတ်သည့်စက်ရုပ်ကိုလည်း မကြာသေးမှီကပင် တီထွင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအနာဂတ်မျိုးဟာသိပ်မဝေးတော့သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါတယ်။ အချို့ကတော့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေဟာ တကယ့်လူသားတွေထက် စက်ရုပ်လက်တွဲဖော်များကိုသာ ပိုသဘောကျကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့နာမည်ကြီးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်နှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်ခွင့်ရကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဒါဟာစက်ရုပ်တွေအတွက် မဆန်းလှပါဘူး။
လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည့် နည်းပညာများဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကို ပုံဖော်ပြနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်များမှ မည်သည့်နည်းလမ်းနှင့် သင့်လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေချင်ပါသလဲ။ သင့်အမြင်လေးတွေကိုလည်းမျှဝေသွားကြပါဦး။
More in this category: « ကားမောင်းသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၇)ချက် သိပ္ပံပညာက အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်နေရတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ »